Sajhasabal.com |कसरी सास फेर्ला मेरो मित्रले ?
कसरी सास फेर्ला मेरो मित्रले ?
एक्लै जित्न खोज्छन्
त्यस्तै त्यस्तै मित्र रोज्छन् ।
मौन बसें म,
कस्तो लाग्यो मित्र ? भनेर
अझ उल्टै झर्को लाग्ने गरी
अरूको हारमा बुल्डोजर चलाउँछन्
आफुले हारेको दिन
अरुको खुसीमा आर्यघाटमा गएर
ईर्ष्याको चितामा दागबत्ती दिन्छ्न् ।
हेर्दै छु म पनि
उल्लु ले झैं उल्टो लट्किएर
उस्को जितौरीमा ठोकेको तालीले
मेरो हत्केलामा उठेको रातो डाम्
अझै हराएको छैन ।
डरको पहाडले थिचीरहन्छ मलाई
मैले जितेको दिन उस्ले ताली होइन
डाहाको अंकमाल गर्ने छन्
किनकि ऊ कहिल्यै हार्न चहाँदैन ।
यही कुराको त मलाई
औधी पिर लागि बस्छ अविरल
उस्को जेठो छोराले हारेको दिन
कसरी सास फेर्ला फोक्सोबाट
मेरो मित्रले ?